परदेश बाटै गायक नबिन भट्टराई आमा संग बिलौना पोख्दै ( भिडियो सहित ) - VOICE OF NEPAL
परदेश बाटै गायक नबिन भट्टराई आमा संग बिलौना पोख्दै ( भिडियो सहित )
३० चैत्र २०७५, शनिबार ००:०० 106 ??? ???????
लोक दोहोरी गायक नबिन भट्टराईको तेस्रो लोक कोसेली “आमा”युट्युब मार्फत बजारमा आएको छ । चर्चित सर्जक शिव सुबेदीको लय तथ शब्द संकलन रहेको गीत गायक भट्टराईले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत आईतवार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गीतको संगित संयोजन बि बी अनुरागीले गरेका छन् । आफ्नो जन्म गाउँ गुल्मीको धुसेनी र कर्मथलो फिन्ल्यान्डको हेल्सिन्कीमा छाँयाङ्कन गरिएको गीतको म्युजिक भिडियोमा गायक भट्टराई स्वयंले अभिनय गरेका छन् ।
भट्टराईका अलावा उनका आफ्नै बुवा आमा र गाउँले दौँतरीहरुलाई समेत भिडियोमा देख्न सकिन्छ । भट्टराईले आफु जन्मेको गुल्मी ठूलोलुम्पेकको धुसेनी र पाहाँदी गाउँको सुन्दरतालाई बडो कलात्मक ढंगले गीतको भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छन् ।